လမင်းခင်: March 2010
ရဲဘော်ဗိုလ်သူ ရဲ့ တင်ပြမှုကိုလက်ဆင့်ကမ်းလိုက်တာပါ ရည်ရွယ်ချက်က ပြည်တွင်းက ရဲဘော်တွေတန်ဖိုး
နယ်စပ် ရောက်လာပြီး ဆုံးရှုံးမှာ ကြောက်လို့ ပါ ။သူကတော့ထွက်သွားပြီးသူများတွေကိုတားချင်တယ်
လို့ မြင်ရင်လည်းမြင်သူမမှားပါဘူး ။ တစ်ခါ တစ်ခါ အံကိုတင်းတင်းကြိတ်ပြီး တံတွေးမျိုချ သီးခံရတဲ့ ကိုယ့်
လို စိတ်အကျဉ်းအကြတ် မျိုးမဖြစ်စေ့ချင်ဘူး ။ ပြည်တွင်းက ကိုယ်တွေလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့တန်ဖိုး
နဲ့လားလား မှမအပ်စပ်တဲ့နေရာမို့ ပါ။ဒီလောက်ဆို ဗိုလ်သူရဲ့ စာမူကို ကျမထောက်ခံတင်ပြတာ နားလည်
စစ်အုပ်စု နိုင့်ထက်စီနင်း ထုတ်ပြန်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥပဒေတွေက NLD ဘာလုပ်မလဲလို့ စိန်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ စစ်အုပ်စုရဲ့ ထိုးနှက်မှုကြောင့် NLD ပါတီတွင်း ရှေ့ ဘယ်လိုရပ်တည်မလဲ၊ သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ ထုံးစံအတိုင်းရှိခဲ့ပေမယ့် “ မတရားတဲ့ အမိန့်အာဏာဟူသမျှ တာဝန်အရ ဖီဆန်ကြ” ဆိုတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အဆိုအမိန့်နဲ့ ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာ စာတမ်းကို အခိုင်အမာ ဆုပ်ကိုင်ရင်း အညံ့မခံ အရှုံးမပေးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) က ချမှတ်လိုက်ပါပြီ။
ဒါဟာ စစ်အုပ်စုရဲ့ စိန်ခေါ်မှုကို “မှတ်ပုံမတင်ဘူး၊ ဘာလုပ်မလဲ” ဆိုတဲ့ စိန်ခေါ်မှုနဲ့ တုန့်ပြန်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါ တယ်။ ခုလောက်ညီညွတ်ကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့ တွေးထင်ပြီး ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ NLD ပြိုကွဲအောင်လုပ်ခဲ့ပေမယ့် ဒီလို မပြိုမကွဲ တညီတညွတ်ထဲ ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့ စစ်အုပ်စု နည်းနည်းတော့ ပြာယာခတ်သွားမှာပါ။ ဒါပေ မယ့် ဒီလိုဖြစ်လာရင် ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ ကြိုပြင်ထားတာမျိုးလည်း ရှိချင်ရှိမှာပါ။ သူတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း တက် ကြွသူတွေကို ဖမ်းမယ်၊ မတရားအသင်း ကြေညာမယ်၊ ပါတီဆိုင်းဘုတ်တွေ ဖြုတ်ချခိုင်းမယ်၊ အနိုင်ကျင့်မှုမျိုးစုံ ကို ကောက်ကျစ်တဲ့ နည်းလမ်းစုံသုံးပြီး လုပ်လာမယ်။ ကြံ့ဖွတ်တွေ၊ ရာဇ၀တ်သားတွေကို သုံးပြီး NLD အဖွဲ့ဝင် တွေကို ၀ိုင်းရိုက်တာမျိုးတွေ လုပ်လာမယ်။ ပြီးတော့ NLD ထဲက မှတ်ပုံတင်ချင်တဲ့ လူကြောက်တွေ၊ ရွေး ကောက်ပွဲဝင်ချင်တဲ့ အခွင့်ရေးသမားတွေကို မြှောက်ပေးပြီး အနိမ့်ဆုံးအဆင့် NLD က နှုတ်ထွက်ပါသည် ဆို တာမျိုး လုပ်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။
“စစ်အုပ်စုက ဖိနှိပ်မှုမျိုးစုံ လုပ်လာခဲ့ရင် နယ်စပ်ကို ထွက်လာတာမျိုးမဖြစ်ဖို့တော့ သတိထားရပါမယ်။ ကိုယ်က နယ်စပ်မှာနေပြီး ဒီလိုပြောရတာ NLD ကို အားနာမှုများစွာနဲ့ တောင်းပန်ပါတယ်။ စစ်အုပ်စုက နယ်စပ်က တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကို လက်ရှိအခြေအနေမှာ ဂရုကိုမစိုက်ပါဘူး။ ပြည်သူလူထုအုံကြွမှာနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေက ပြန်တိုက်မှာပဲ ဂရုစိုက်တာပါ။ လူတွေ နယ်စပ်ကိုထွက်တာ တခြားနိုင်ငံတွေကို ခိုလှုံတာ စစ်အုပ်စုအကြိုက်ပါ။ နယ်စပ်ရောက်သွားပြီးရင် တော်လှန်ရေးအလုပ်ထက် ဘ၀ရပ်တည်ရေးအလုပ်တွေပဲ လုပ်ဖြစ်သွားကြတာ များပါတယ်”
NLD အနေနဲ့လည်း ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ပြင်ရပါတော့မယ်။ စစ်အုပ်စုရဲ့ မတရားတဲ့ ဥပဒေတွေအောက်မှာ ပါ တီမှတ်ပုံမတင်ဘူး၊ တင်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေကြားမှာ ဗမာပြည် ပြည်သူလူထုကြားမှာ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကြားမှာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ ရပ်တည်ချက်သာဖြစ်ပါ တယ်။ အဲဒီရပ်တည်ချက် ခိုင်မာကြောင်းပြဖို့၊ ရန်ပြုလာမယ့် စစ်အုပ်စုကိုကာကွယ်ဖို့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ချမှတ်ရ ပါမယ်။
ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်းပါ အချက်တွေကို ကြွေးကြော်သံအဖြစ်ကိုင်ဆွဲရင်း လူထုကို ဦးဆောင်ရပါမယ်။ NLD ဟာ လူထုဦးဆောင်ပါတီ၊ လူထုရှေ့က တပ်ဦးပါတီ ဖြစ်နေရပါမယ်။ စစ်အုပ်စုက ဖိနှိပ်မှုမျိုးစုံ လုပ်လာခဲ့ရင် နယ်စပ်ကို ထွက်လာတာမျိုးမဖြစ်ဖို့တော့ သတိထားရပါမယ်။ ကိုယ်က နယ်စပ်မှာနေပြီး ဒီလိုပြောရတာ NLD ကို အားနာမှုများစွာနဲ့ တောင်းပန်ပါတယ်။ စစ်အုပ်စုက နယ်စပ်က တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကို လက် ရှိ အခြေအနေမှာ ဂရုကိုမစိုက်ပါဘူး။ ပြည်သူလူထုအုံကြွမှာနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေက ပြန်တိုက်မှာပဲ ဂရုစိုက်တာပါ။ လူတွေ နယ်စပ်ကိုထွက်တာ တခြားနိုင်ငံတွေကို ခိုလှုံတာ စစ်အုပ်စုအကြိုက်ပါ။ နယ်စပ်ရောက်သွားပြီးရင် တော်လှန်ရေးအလုပ်ထက် ဘ၀ရပ်တည်ရေးအလုပ်တွေပဲ လုပ်ဖြစ်သွားကြတာများ ပါတယ်။
လက်ရှိ နယ်စပ်တွေမှာ ရှိနေကြတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားဆိုသူ အများစုဟာ အလုပ်သမားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာ ရေး၊ကလေးအခွင့်အရေး၊ အမျိုးသမီးအရေး ... စသဖြင့် ခေါင်းစဉ်တွေပြ၊ NGO တွေနဲ့ပေါင်းပြီး ကိုယ့်ရပ်တည် ရေးအတွက် ကိုယ်လုပ်နေကြတာများပါတယ်။ လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိရင် လင်က တဖွဲ့၊ မယားက တဖွဲ့၊ လင် မယားနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး တပ်ပေါင်းစုရယ်လို့ တဖွဲ့၊ နှစ်ယောက်ရှိရင် သုံးဖွဲ့ ဖွဲ့ပြီး လစာထုတ်စားနေကြတဲ့ လ ခစား နိုင်ငံရေးသမားတွေ များပါတယ် (မှန်မှန်ကန်ကန် တိုက်ပွဲဝင်နေသူတွေကို မပြောပါ)။
ဒါကြောင့် စစ်အုပ်စုက နယ်စပ်က လူတွေကို မကြောက်ပါဘူး။ ပြည်တွင်းထဲက NLD အဖွဲ့ဝင်တွေကိုတော့ လူ ငယ်လေးတွေကအစ သူတို့ ကြောက်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေနဲ့ ထိတွေ့နေပြီး ပြည်သူ့အုံကြွမှုကို ဦးဆောင်နိုင် မယ့်သူတွေ ဖြစ်သွားမှာ စိုးရိမ်လို့ပါ။ ဗမာပြည် အကျဉ်းထောင်အသီးသီးက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား (၂၁၀၀) ကျော်မှာ NLD အဖွဲ့ဝင် (၅၀၀) နီးပါးရှိနေတာ လူထုက ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ NLD ကို စစ် အုပ်စု တလျှောက်လုံး ကြောက်နေခဲ့လို့ပါ။ အဲဒီတော့ အဖမ်းခံစရာရှိ ရဲရဲအဖမ်းခံ၊ သေစရာရှိ ရဲရဲသေပြီး ပြည် တွင်းမှာပဲ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ တိုက်ပွဲဝင်ရင်း ဖြတ်သန်းဖို့၊ ပြည်သူကို ဦးဆောင်မှုပေးဖို့ အားနာနာနဲ့ပဲ တောင်း ဆိုပါရစေ။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုသည်” လို့ တဆက်တည်း ဆုံး ဖြတ်ခဲ့တာ ဒီကနေ့အဖြေအနေနဲ့ အကိုက်ညီဆုံး တောင်းဆိုမှုပါ။ အရေးကြီးတာက တောင်းဆိုမှုက အချိန်အ ကန့်အသတ် လိုနေပါတယ်။ ပြီးရင် အဲဒီအချိန်အတွင်း တောင်းဆိုမှုကို မလိုက်လျောရင် ဘာလုပ်မလဲဆိုတာ ပါ။ ကြိုတင်ပြင်ထားဖို့လိုပါတယ်။ တောင်းဆိုနေရုံသက်သက်ဆိုရင်တော့ စစ်အုပ်စုက မလိုက်လျောတတ်ဖူး ဆိုတာ (၂၁) နှစ်စာ အတွေ့အကြုံတွေကနေ သိသင့်ပါပြီ။ တိုက်ပွဲနဲ့ တောင်းဆိုမှရမှာပါ။
ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားအားလုံးကလည်း NLD ကို တပ်ဦးတင် လိုက်ပါဖို့ လိုပါတယ်။ စစ်အုပ်စု က NLD ကို (၂၁) နှစ်တာကာလ တလျှောက်လုံး နှိပ်ကွပ်ခဲ့သလို ခုလည်း အရင်ထက်ဆိုးတဲ့ နှိပ်ကွပ်မှုတွေနဲ့ တုန့်ပြန်လာတော့မှာပါ။ ခုချိန်မှာ NLD အရေးဟာ ပြည်သူ့အရေးပါ။ NLD ဖြိုခွဲခံရရင် ကျနော်တို့တော်လှန်ရေး ကြာသထက်ကြာနေဦးမှာပါ။ “စစ်အုပ်စုရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေးကော်မရှင်မှာ ပါတီမှတ်ပုံတင်ဖို့မလိုပါ” ဆို တဲ့ NLD ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ထောက်ခံပါသည်ဆိုတာမျိုး၊ ကြေညာချက်တွေ ထုတ်နေရုံသာမဟုတ်ပဲ NLD နှင့်ထပ်တူ ထိထိရောက်ရောက် တိုက်ပွဲဝင်မှုမျိုး လုပ်ကြရပါတော့မယ်။ ၂၀၁၀ လူထုတိုက်ပွဲကြီး လူထုအရေး တော်ပုံကြီးဆင်နွှဲဖို့ အချိန်ကျပါပြီ။ ဦးဆောင်ရမှာက NLD ပါ။
ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ ဘလော့မှကူးယူဖေါ်ပြသည် ။
Posted by LRDP at 8:57 AM0comments Links to this post
Posted by LRDP at 4:16 PM2comments Links to this post
NLDST300310 ( 30-3-2010)
Posted by LRDP at 7:18 AM 1 comments Links to this post
မှတ်ပုံမတင်ဘူးဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့နောက် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ မှတဆင့်တိုးမြှင့်သည့်နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုပေးခဲ့ရင်ဖြင့်
ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ စီအာ(ရ်)ပီပီ ရှိနေပြီးသား မို့ဒီကော်မတီတရပ်ကို တဆင့်တိုးမြင့်ဆောင်၇ွက်လိုက်
ရုံနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြီးမြောက်သွားပါလိမ့်မယ် လို့ ကျမယုံကြည်ပါတယ် ။ ဒါ့ ကြောင့် စီအာ(ရ်) ပီပီ ကို တဆင့် တိုးမြင့်ဖို့တိုက်တွန်းကြရမှသာလျှင် အားဖြည့်ကြမှသာလျှင်အန္တိမရည်မှန်းချက်ဆီရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။။
ဒီကနေ့သတင်းနှစ်ခု ကို ကျမ တချိန်တည်းဖတ်မိလိုက်တယ် တစ်ခု က မှတ်ပုံတင်ရင် ကန့် ကွက်မယ် ဆိုတဲ့ မြို့ နယ်တွေစာရင်း
မှာကျမ ပါတီတာဝန်ယူစဉ် ရပ်တည်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ အင်းစိန် တွေ့ လိုက်ရလို့ အင်မတန်ဝမ်းသာမိပါတယ်။နောက်ထပ် မေး(လ်)
တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်တော့ အန်တီ့ခြံထဲကပါးလိုက်တဲ့ လက်ဆောင် ဗူးသီးကြီး ကိစ္စ ။။ သေချာတယ် အန်တီက ဗူးဆိုဖရုံမသီးဘူးဆို
တဲ့ သင်္ကေတ -ဒီ့အတွက်လည်း ကျမ အတိတ် ကိုပြန်သတိရပြီး အန်တီ ၁၉၉၆ က ပါတီလူငယ် တွေကိုမတ်ဆိတ် ပေးခဲ့ပုံလေး
၁၉၉၆ မှာ ကျောင်းသားတွေ က နိုင်ငံေ၇းမပါ ကျောင်းသားအအေ၇း ကျောင်းသားသမဂ္ဂပဲတောင်းဆိုကြမယ် ဆိုပြီးကျောင်းသား
ထု လမ်းပေါ်ရောက်လာပါတယ် ၂-၁၂-၁၉၉၆ မှာဦးထောင်ဘိုလမ်းအထိ ရန်ကုန်အင်းစိန်လှည်းတန်းကနေကျောင်းသားတွေ
ကျမလည်းအဖွဲ့ ချုပ်ရုံကစောစောပြန်ပြီး ကျောင်းသားထု ဘေးမှာပေါ့--ဘေးမှာဆိုလို့ ကျမရှောင်နေတာလားဆို မဟုတ်ပါဘူး။
အဲဒီ့ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်နေကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခြံဝန်းထဲမှာ ကျမတို့ နဲ့ အတူစာဖတ်ဝိုင်း
လုပ်ပြီးဆွေးနွေးနေကျ ဆိုတော့ ကျမမျက်နှာကို သူတို့ ရင်းနှီးနေတဲ့ အတွက် ကျမ ၀င်ဆန္ဒပြချင်တာတောင်သူတို့ က ခွင့်မပြုခဲ့
၂ရက်နေ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲ မှာမည်သို့ ပင် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုသီးခြားဖြစ်စေကာမူပါတီဝင်တွေ မြို့ နယ်လူငယ်ခေါင်းဆောင်
တွေ ကတော့ မနေသာပါဘူး လိုက်ပါကူညီခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီည (၃-၁၂-၁၉၉၆) အကူးမှာပဲ မသီသီအောင် အပါအ၀င် ပါတီလူငယ်
၄ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ် ။ ဖမ်းဆီရတဲ့အကြောင်းရင်းက ဆန္ဒပြ သူတွေ ကိုလိုက်ကူညီတာရယ်အန်တီ့ကို ဒီသတင်းသွားပြော
ဒီသတင်း နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးကျမ က အန်တီရဲ့ သဘောထားကိုသိတ်သိချင်ပါတယ်ကျမအန်တီနဲ့ တွေ့ ခွင့်တောင်းတယ်အန်တီက
ရုံးမှာလူငယ်တွေစုထား အန်တီလာမယ်ဆိုပြီးလူငယ်တွေ အားလုံးရှေ့ မှာ အန်တီ မေး ခဲ့တဲ့ စကား က NLD ဟာပြည်သူ့ ရှေ့ရပ်
ရမှာလားပြည်သူက NLD ရှေ့က ရပ်ရမှာလား ဆိုတာရယ် -ကျောင်းသားတွေဟာဘယ်သူ့ ရင်သွေးတွေလဲ ဆိုတာရယ်ဗိုလ်ချုပ်
တို့ လက်ထက်က မျိုးချစ် လူမိုက်လေးတွေ ရှိခဲ့တယ် ဆိုတာရယ် ပဲ မေးပြော--ပြောခဲ့ပါတယ် -
အန်တီ့ ဆီကကျမတို့ က ညွှန်ကြားချက်တောင်းတဲ့အခါအန်တီကလူငယ်တွေကအလုပ်မလုပ်ချင်ရင်ညွှန်ကြားချက်တောင်းကြ
တယ် လို့ ပြောပါတယ်။။
ကဲ ရဲဘော် တို့ 
ဒါတွေ ကို ကျမ က သုံးသပ် ပြီးမြင်ခဲ့တာ က အန်တီဟာ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု ကိုပါတီ က လူငယ်တွေ ပါတီဝင်တွေ
ကရှေ့ကရပ်ပေးရမယ် ။ သတ္တိရှိဖို့ဆိုတာကို ဗိုလ်ချုပ်တို့လက်ထက်က လူမိုက်အလို ရှိသည်ဆိုတာလေးနဲ့သာဓကပြပြီး
ညွှန်ကြားချက်စောင့်သူတောင်းသူက မလုပ်ချင်သူ ကိုယ်စေတနာမှန်ရင် လုပ်သင့်တယ် ထင်ရင် လုပ်ရမယ် လို့ ညွှန်ကြားလိုက်
တယ်လို့ နားလည်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၆ ကျောင်းသားဆန္ဒပြပွဲကို ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ကျမနဲ့ အတူ လူငယ်တစ်ချို့ ကဒီလိုသုံးသပ်ပေမဲ့ အချောင်သမားများကတော့ဒေါ်စုကနင်တို့ ကိုမလုပ်စေ့ချင် လို့ မပါဝင်စေ့ချင်
လို့ လူမိုက် လို့ ပြောတာပါဆိုပြီး ၁၉၉၆ ကျောင်းသားအရေးတော်ပုံ မှာ မျက်ကွယ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါအချောင်သမားစိတ်ဓါတ်ပါ
ဒီအချိန်မှာ ကိုယ်ဘာလုပ်ရမယ် ဘာလုပ်သင့်တယ် ဆိုတာ သိသိ နဲ့ အထဲ က ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစောင့်မယ် တို့အများသဘော
ကို ယူမယ် တို့ ဆိုတာ တော်လှန်ရေးအတွက် တကယ်အနှစ်မရှိတဲ့ အချောင်သမားတွေ ရဲ့ လက်နက်တခုပါပဲ ။
ခု အန်တီက ဗူးသီးပေးလိုက်တာကို လိုသလို စွဲ ပြောတယ်လို့ကျမ ကိုပြောမယ်ဆိုရင်လည်း အန်တီ့ နုတ်ကထွက်တဲ့စကားကို
ထိပ်တိုက်တွေ့ ခဲ့ရတဲ့ ပြသနာတစ်ခု မှာဆိုရင် ဒီပဲယင်းလုပ်ကြံမှုကြီး ပြီးစမှာ လူထုခေါင်းဆောင်အပါအ၀င် စီအီးစီအားလုံး
ဖမ်းထားချိန်ပေါ့ကျမလည်းထောင်ကထွက်ကာစပါတီမှာလည်းခေါင်းဆောင်ကို လုပ်ကြံမှုကြီးနဲ့ ကြုံတော့ မဖြစ်မနေ ကျမ
လူငယ်တွေ နဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုနေစဉ် အန်တီ အာရှတော်ဝင်ဆေးရုံ မှာခွဲစိတ်ကုသခံနေရတဲ့အတွက် ကျမ တို့ လူငယ်တွေနဲ့ 
ထိုင်သပိတ်တွေပြုလုပ်နေဆဲ မှာ ဦးအောင်ရွှေ နောက်လိုက် ဒေါက်တာဝင်းနိုင်နဲ့ ကိုခင်ထွန်းဆိုသူရောက်လာပြီးပါတီရဲ့ ခွင့်ပြု
ချက်မရှိပဲ နဲ့ ဆန္ဒပြလို့ ဦးဆောင်တဲ့ ကျမ ကိုပါတီ အနေနဲ့ အရေးယူမယ်လို့ လာပြောပါတယ် ။
မသိသေးမလာသေးတဲ့အတွက်ပြည်သူမြင်အောင်ဆက်ဆန္ဒပြ ခဲ့ကြပါတယ်။ တချို့ အချောင်သမားလေးတွေ ဆို ကျမတို့ကို
ပစ်တင်ချုံ့ ချကြပါသေးတယ်။(ခု ကျမရေးတဲ့ စာဖတ်ပြီးသူတို့ လိပြာတွေ မလှမှာအသေအချာပါပဲ)
ကျမတို့ ဆန္ဒပြ လို့ သိတ်မကြာခင်မှာပဲ အန်တီက ကျမတို့ ကိုထောက်ခံကြောင်းပြန်ကြားလာတဲ့အခါ ဒေါက်တာဝင်းနိုင်တို့ 
ခမျာ ကျမတို့ ကိုတလေးတစားခေါ်ဆွေးနွေးပါတော့တယ်။။ ဒါအကျဉ်းတင်ပြတာပါ။ သူတို့ တွေ ရဲ့ ပါတီတွင်းသမိုင်းကြောင်း
တလျောက် (နှစ်နှစ်ဆယ်)ဖောက်ပြန်ချက်တွေ ကို ကျမတို့ လူငယ်ထု အများဆုံး သိရှိခံစားခဲ့ကြရတာပါ။
အတိတ်အကြောင်းလေး ဦးစွာတင်ပြပြီး ဆိုလိုချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဒေါ်စု ဟာသူမရပ်တည်တာဝန်ယူနေရတဲ့နေရာ
ကနေ ဘာလုပ် ဘာလုပ် ဆိုပြီးအမိန့် ပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူးသူဟာ ဒီမိုကရေကရေစီနဲ့ လူ့ အခွင့်အရေးတိုက်ပွဲ မှာ အမိန့် နဲ့ 
အာဏာနဲ့ပါတီဝင်တွေပြည်သူတွေကို ဦးဆောင်သွားမဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး ။
ခေါင်းဆောင်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ စေတနာကို နားလည်သိတက်နေမဲ့နောက်လိုက်ကောင်းတွေနဲ့ ပြည်သူတွေ ကတော့ ဒီ
ီအခြေအနေမှာဒေါ်စု ဘာလုပ်စေ့ချင်သလဲ တို့ ကရော တိုင်းပြည်အတွက်စေတနာမှန်မှန် နဲ့ ဘာလုပ်သင့်သလဲ ဆိုတာ
ကျမ တခုခု ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ မချင့်မရဲဖြစ်တိုင်းမှာ ၁၉၉၆ကဒေါ်စု ပြောတဲ့တကယ်အလုပ်လုပ်ချင်သူ တိုင်းပြည်အတွက်
စေတနာမှန်သူတွေ လုပ်သင့်တယ်ထင်ရင် လုပ်၇မယ် မလုပ်ချင်ကြလို့အထက်က ညွန်ကြားချက် စောင့်ကြတောင်းဆိုကြ
တာဆိုတဲ့ စကား ကို ပြန်ကြားမိပြီး လုပ်သင့်တယ် ထင်ရင် လုပ်ပါတယ် ။ ခုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သဘောထားကိုလည်း
စောင့် ကြည့်ခဲ့ကြပြီးပါပြီ ကျမတို့ ဆို ခေါင်းဆောင်ရဲ့ မနောကို သုံးသပ်လာနိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေထွက်
ကတည်း က မှတ်ပုံမတင်သင့်ဘူးအော်ခဲ့ ပြောခဲ့ ကြသူတွေပါ။ခု မှတ် ပုံမတင်ဘူး ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် သေချာ ကျလာတော့
မဲ့ဒီကနေ့ မှာ ဘာပြင်ဆင်ထားလဲ လူထုခေါင်းဆောင် နဲ့ အတူ ဘဘဦးတင်ဦး ဘဘဦးဝင်းတင်တို့က ဘာဖြစ်စေ့ချင်မလဲ
တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေက ဘာ ကို ဦးတည်ချင်လဲ?????
ကျမတို့ညွှန်ကြားချက်ကိုမစောင့် ပဲ တဆင့် တိုးပြီးစဉ်းစားပြင်ဆင်ကြရအောင်လား ??????
Posted by LRDP at 3:31 PM0comments Links to this post
Posted by LRDP at 7:12 AM0comments Links to this post
ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်စန်းစန်းမှလုံခြုံရေးကောင်စီတွင်စစ်အုပ်စုအားအရေးယူဆောင်ရွက်ရန်ပေးပို့ သည့်စာ
Daw San San (MPU)
Posted by LRDP at 8:08 PM0comments Links to this post
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်စုံညီအစည်းအဝေး မှ လူငယ်ထုကိုယ်စားပြုခေါင်းဆောင် (၅၁)ဦးဆုံးဖြတ်ချက်
Posted by LRDP at 9:32 AM0comments Links to this post
NLD လူငယ်များ၏အစဉ်အလာကောင်းခဲ့သောရဲရင့်သည့် စိတ်ဓါတ်နှင့်အကြပ်အတည်း များကြားတွင်ရဲရဲတောက်
ဆုံးဖြတ်ချက်အား အသိအမှတ်ပြု ဂုဏ်ယူပါသည် ။
Posted by LRDP at 8:24 AM0comments Links to this post
Posted by LRDP at 10:51 AM0comments Links to this post
Posted by LRDP at 10:13 AM0comments Links to this post
(၁၈) ရာစုရဲ့ ချီကာကိုလည်း ဖြစ်တယ်။
စပါတာကပ်ရဲ့ မျိုးဆက်တွေ ပေါ်ထွက်ခဲ့သလို
ငတေမာသူ အလိုတော်ရိတွေလည်း ရှိတယ်။
မဲဆောက်ရဲ့ တမျှော်တခေါ် ဥယျာဉ်ခြံကျယ်ကြီးထဲ
ခေတ်သစ် အရိုးတွန်သံတွေ ရှိတယ်။
ဖါးဖါးချင်း ငါးငါးချင်း ဇာတ်တူသားစားပြီး
နှစ်ဖက်ချွန် သုံးဖက်ချွန်တွေ ရှိတယ်။
ဦးနှောက်ကို လေလံပစ်သူတွေလည်း ရှိတယ်။
တခါတခါ မျက်စိလည် လမ်းမှားလာတတ်သလို
တထောက်ခိုရာ သာလာယံဇရပ်တဆောင်လည်း ဖြစ်တယ်။
ဇော်ပိုင်ရဲ့ သီချင်းကို ဖျက်ဆိုလိုက်ချင်ရဲ့
အစွယ်လိုသူ မိဖုရား အသွားစေခိုင်းသူ မင်းဧကရာဇ်
လုပ်အားရောင်းသူ၊ အသွေးအသား ရောင်းသူ
မနေ့တနေ့ကမှ မထင်မရှား ကျူးလွန်းခဲ့သေးတဲ့
ပိတောက်ပွင့်သစ် စာပေအနုပညာ မဂ္ဂဇင်း အမှတ်(၃) ဧပြီ ၂၀၀၆
ကိုမောင်ရီ (စာမူခွင့်ပြုချက် ဆင်ဆာ အဖွဲ့ ကိုကျော်ပြီးမှ အာဏာပိုင် မှ ဆုတ်ဖြဲခိုင်း
သဖြင့် ဆုတ်ဖြဲခံခဲ့ရသော်ကဗျာဖြစ်သည်) ရဲဘော်တင်အေး ရဲ့ ရင်ကို ထိစေသော ၁၉၉၀ များ
ဆရာတော် ဦးဇ၀နမှ၂၀၀၃ ဒီဇင်ဘာ၊ တောင်ငူထောင်တွင် ရေးဖွဲ့သည်။
Posted by LRDP at 11:33 PM 1 comments Links to this post
ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် (မန္တလေး) ဦးသိန်းဦးဧ။် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တွင်တင်ပြချက် MPU နှင့် မဆိုင်
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ အမျိူးသားကောင်းစီနှင့်အတူ အမျိူးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချူပ် လွတ်မြောက်နယ်မြေ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ ၊ လူငယ်-အမျိူးသမီး အဖွဲ့ အသီး သီး မှ ခေါင်းဆောင်များဧ။် အဖွဲ့ များနှင့် လူ့ ဘောင်သစ်၊ DAB၊ FDB စသော အဖွဲ့ များအပါအ၀င် အဖွဲ့ပေါင်းစုံပါဝင်သော ၁၅ ကြိမ်မြောက် မဟာဗျူဟာ ညှိနှိုင်းပွဲတရပ်ကို ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်တနေရာတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
၁၅ ကြိမ်မြောက် မဟာဗျူဟာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှ ပြည်တွင်းရှိ အမျိူးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချူပ် သည် ရွှေဂုံတိုင်ကြော်ငြာစာတမ်းနှင့် ဆန့် ကျင်လျှက် - ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို လိုက် နာပါမည်။ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပါမည် ဟူသော ၀န်ခံကတိ လက်မှတ်ထိုးရမည်ဖြစ်သော မတရား သော ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေအရ ပြုလုပ်သော ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန်အတွက် ပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ကို လုံးဝ မလုပ်သင့်ကြောင်း ဘုံသဘောတူညီချက်တရပ် ရရှိဆုံးဖြတ်နိုင်ကြောင်းသိရသည်။
အထက်ပါ သဘောထားရပ်တည်ချက်ကို ၀င်ရောက်လာသော အဖွဲ့၁၀ဖွဲ့ အနက် NCGUB၊ NLD(LA) အဖွဲ့ ကသာလျှင် အမျိူးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချူပ်ဧ။် လာမည့် ၂၉ ရက်နေ့ မှ စသောမျက်နှာ စုံညီ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို စောင့်သင့်ကြောင်း သဘောထားရှိသည်မှလွဲ၍ အားလုံး သဘောတူညီသော ဘုံ သဘောထားဖြစ်ပါသည်။
ယခု မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့ တွင် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (မန္တလေး) ဦးသိန်းဦးဧ။် မှတ်ပုံတင်သင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးချက်ကို တတ်ရောက်လာကြသော ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ အသီးသီးမှ ခေါင်း ဆောင်များက သဘောမတူကြောင်း သိရသည်။
MPU ဧ။် တာဝန်ရှိသူတဦးကမူ ပါတီမှတ်ပုံတင်သင့်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ကို MPU အမှု ဆောင်ကော်မတီမှ မည်သည့်အခါမျှ ချမှတ်ထားခြင်းမရှိကြောင်း မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့ဘန်ကောက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲသို့ဦးသိန်းဦး သွားရောက်ခြင်းမှာ BLC ကို ဖိတ်ကြား၍ သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း MUP အနေဖြင့် တတ်ရောက်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း ကြိုတင်ပြိး MPU သဘောထားရယူခြင်း မဟုတ် ကြောင်း ဦးသိန်းဦးတဦးတည်းဧ။် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး သဘောထားဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
၁၅ ကြိမ်မြောက် မဟာဗျူဟာ အစည်းအဝေးသို့အဖွဲ့ အစည်းအသီးသီးမှ ခေါင်းဆောင် (၃၀)ခန့်တတ်ရောက်ပြီး ဘုံသဘောတူညီချက် (၉)ချက်ကို ချမှတ်ခဲ့ပြီး နက်ဖြန်မှစ၍ ဘုံလမ်းစဉ်သဘောထား များကို စုစည်းချမှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ဘုံသဘောထား ရပ်တည်ချက်များ ချမှတ်ပြီးနောက် လာမည့်အမျိူးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချူပ် စုံညီအရေးပေါ်အစည်းအဝေးကို စဉ်းစားနိုင်ရန် သဘောထား ရပ်တည်ချက် စုစည်းမှုနှင့် လုပ်ငန်းလမ်းစဉ်များကို ပြည်သူများသို့အသိပေးကြော်ငြာချက် ထုတ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Posted by LRDP at 11:05 PM0comments Links to this post
ကဗျာဆရာစာရေးဆရာများဖြစ်သော ဂါမဏိ(ဦးအောင်စိုး) ၊ ဦးစိုးနေလင်း ၊ ဦးငြိမ်းဝေ ၊ဦးတင်အေး ၊ ဦးလွမ်းဏီ၊ ကိုစိုင်းလတ် ၊
အယ်ဒီတာ ဒေါက်တာလွမ်းဆွေ ဘလော့ကာ ခင်မင်းဇော် ၊ လမင်းခင် ၊နှင့်စာရေးဆရာ စန်တာကလော့ တက်ရောက် ၍ ဆရာကြီး
သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း အားဂုဏ်ပြုစကားများမိမိတို့မြတ်နိုးနှစ်သက်သည့် ကဗျာ အပေါ်ခံစားတွေးခေါ်မှုများကို တင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
ကဗျာများနေ့ အတွက် စာရေးဆရာ ဂါမဏိ က ဒီအချိန် အဘမှိုင်းသာ၇ှိခဲ့ရင် ဆိုပြီး အဘ မှိုင်းရဲ့ နယ်ချဲ့ တော်လှန်ရေးတလျောက်
ရဲရင့်တဲ့ ကလောင်လက်နက်တွေကိုတင်ပြသွားပါတယ် ။
ဒေါင်းအိုးဝေရယ်နဲံတွန်စေ ကစေသော-----------
Posted by LRDP at 3:58 AM0comments Links to this post
Posted by LRDP at 11:15 AM0comments Links to this post
16-3-2010ဒီကနေ့ ဖြူစင်လွန်းတဲ့တံတားဖြူ မှာသွေးရောင်စွန်းထင်းခဲ့ရတဲ့ တံတားနီ လို့့ ကဗျည်းတွင်ခဲ့ရတဲ့အင်ယျားကန်ဘောင် က ၀ိညာဉ် များ ပြန်လည်နိုးထလာစေမဲ့ 
(၂၂)နှစ်ပြည့် တံတားနီနေ့ 
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၂ နှစ် မှာ ကျောင်းသားထု ဟာ ရဲဘော်ကိုဖုန်းမော် ကျဆုံးရမှု ကိုအခြေပြုပြီးစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ မတရားမှုကို ခံပြင်းရက
စရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများက ပင်မ မှ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်လှိုင်နယ်မြေ သို့ ကျောင်သားထုတခဲနက်ချီတက်ခဲ့ကြတဲ့အစ
၁၉၈၈ ရဲ့ ပထမဆုံးလမ်းပေါ်တက်ခဲ့တဲံ ကျောင်းသားထုဆန္ဒပြပွဲကို မဆလစစ်ခွေးများမှအင်ယားကန်ဘောင်ရဲ့တံတားဖြူမှာဖြိုခွင်း
ခဲ့ရတဲ့နေ့ ဖြစ်ပါတယ် ။။ ဒီကနေ့ အင်ယျားကန်ဘောင်ပေါ်မှာအရိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားသွေးတွေ ပြန်နွေးလာပြီမို့သူတို့ ဝိဥာဉ်
တွေနဲ့ အတူတကွ မျိုးဆက်သစ်တွေရေ မတရားမှု ကို ရဲရဲရင့်ရင့်တွန်းလှန်ကြရအောင် -ဒို့ ကျောင်းသားတွေညီရဲ့လားဟေ့ -----
ညီတယ်ဟေ့ဆိုတဲ့ကြွေးကျော်သံနဲ့ အတူ ခေတ် နဲ့ အချိန်ကာလ ကပေးလာတဲ့တို့ တတွေ ရဲ့ တော်လှန်ရေးဘ၀ ကို တာဝန်တွေ
ကြေသည်အထိအဆုံးသတ် တိုက်လိုက်ကြရအောင်လား --
Posted by LRDP at 5:37 PM0comments Links to this post
၈၈၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမိုးသီးဇွန်နှင့် နေ့ သစ်မီဒီယာတို့ တွေ့ ဆုံမေးမြန်းခန်း
ကန့် ကွက်ချုံ့ ချရုံတင်မက လမ်းစဉ်ချမှတ်၍ တိုက်ဖြတ်ကြမည်
ဆိပ်ကမ်းပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်စန်းစန်း ဦးဆောင်ပြီး လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ မှ စစ်အုပ်စုရဲ့
ယုတ်မာဆုတ်ပဲ့ တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ကို ကန့် ကွက်ချု့ ချတဲ့ ပွဲ ကို ဖရိုမန်းရှာလာဖန်း ခမ်းမမှာဒီကနေ့ ကျင်းပဖြစ်ခဲ့
ပါတယ်။။ အခမ်းအနားကိုကရင့်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်များအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ဝင်များ တပ်ပေါင်းစုမှတာ
၀န်ရှိနေသူများ ၊အလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်းအသီးသီးနှင့် ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးမိုးသီးဇွန်တို့ တက်ရောက်ကြ
ပါတယ်။ အခမ်းအနားမှာတော့ အစဉ်အလာအတိုင်းပြောနေတဲ့လေထဲကစကားတွေ ကိုအဆုံးသတ်ပြီး အလုပ်တစ်ခုကို
ဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါကတော့ယမန်နေ့ ကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ကိုဖုန်းမော်နှစ်ပတ်လည်နေ့ မှာရရှိခဲ့တဲ့ သပိတ်မှောက်
ရုံမက လက်တွေ့ ကျတဲ့ အကောင်အထည် အက်ရှင်တစ်ခုကို ဆောင်၇ွက်ကြဖို့ ပါပဲ ။ မြန်မာပြည်ရဲ့ စစ်အာဏာရှင်ဝါးမျို
မဲ့ လက်တစ်ကမ်းမှာ စစ်အာဏာရှင်ကိုချောက်ထဲ ချနိုင်ဖို့ ရာက ပြည်သူ့ အစိုးရပါပဲ ။ပြည်သူ့အစိုးရဆိုတဲ့နေရာမှာတော့
အမျိုးသားညွန့် ပေါင်းအစိုးရ ကို ဆိုလို တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတင်ပြထားပါရစေ ။ ပြည်သူလူထုအမှန်
တကယ်မျော်လင့်ထားတဲ့ ရဲရဲပြော ရဲရဲလုပ်နေတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဝင်းတင်တို့ လိုပုဂိုလ်မျိုး
ဦးဆောင်တဲ့ ပြည်သူအစိုးရကိုဆိုလို တာပါ ။။ ပြည်သူ့ အစိုးရကို စီအာပီပီ အပါအ၀င်ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ လွတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်များက တာဝန်သိသိ တာဝန်ရှိရှိနဲ့ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်သင့်ပါပြီ။ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ အစိုးရကိုလည်း ပြည်သူ့ 
လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီတစ်ရပ်လုံးအပါအ၀င် ၊ BLSO ၊၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားအများ အလုပ်သမားအဖွဲ့ အ
စည်းအများစု နဲ့ အမှန်တကယ်စစ်အာဏာရှင်ကိုကျဆုံးစေလိုသူတော်လှန်ရေးပြီးလို သူ အားလုံးက တစ်ခဲနက်ထောက်
ခံပါသည် ဆိုတဲ့ သဘောထားကို ရရှိခဲ့ ပါတယ်။။ယခုအစပြု မှုမှဆက်လက်၍ အဖွဲ့ အစည်းအသီးသီးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီး
စစ်အုပ်စုအမြှစ်ပြတ်တော်လှန်မဲ့တိုက်ပွဲ ကို သူသေ ကိုယ်ရှင် တော်လှန်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါတယ် ။။
Posted by LRDP at 12:58 AM0comments Links to this post
ကိုဖုန်းမော်ကျဆုံး ခဲ့တာ ၂၂ နှစ်ပြည့် ရဲ့အဆုံးအဖြတ်ဟာစစ်အာဏာရှင်အဆုံးသတ်မဲ့နေ့ ရက်
ဒီကနေ့ကိုဖုန်းမော်ကျဆုံးခဲ့တဲ့ ၂၂ နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့ ဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့ အတွက် စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်းတွေ
ဖြစ်တဲ့ ကိုသံဒုတ် ၊ ကိုမင်းဇော် တို့ ကဦးဆောင်ပြီးကျင်းပခဲ့ပါတယ်။။
အခမ်းအနားမှာ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေ ပြည်သူ့ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေထဲက အမှန်တကယ်
အလုပ်လုပ်တဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဆိပ်ကမ်းမြို့ နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်စန်းစန်း နဲ့ သထုံပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
ကိုခွန်မြင့်ထွန်း အပြင် ဗကသ (နိုင်ငံခြားရေး) လူ့ ဘောင်သစ် အလုပ်သမားအဖွဲ့ အသီးသီး မှ တာဝန်ရှိသူများ ၊ ဒီအေဘီ မှအတွင်းရေး
မှုးဒေါက်တာကျော်ညွန့်ရဟန်းပျိုသမဂ္ဂ ဆရာတော် ဦးခေမာစာရ၊နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆရာတော် ရှင်ဇ၀န ၊ နဲ့ အတူ ၈၈ အရေးတော်
ပုံကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးမိုးသီးဇွန် တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ် ။။ အခန်းအနားမှာ ကိုဖုန်း မော် ကိုစိုးနိုင် နဲ့ကျဆုံးခဲ့တဲ့ ရဟန်း
ရှင် လူ ကျောင်းသား ပြည်သူ လေးညွှတ်ဂုဏ်ြ့ပီး သံဃာတော်များအားဆွမ်းကပ်လှူကာ ကျဆုံးခဲ့သူတွေအတွက်ရေစက်ချ အမျှပေးဝေ
အဲဒီ့နောက်မှာတော့ လက်ရှိ စစ်အုပ်စုရဲ့ စစ်ကျွန် သက်ရှည်စေမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး
ဘယ်လို တိုက်ပွဲဝင်သပိတ်မှောက်ကြမယ် ပြည်ပက စုစည်းညီညာတဲ့ တစ်သံတည်းထွက်စေနိုင်မဲ့ လှုပ်ရှားမှုအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါ
တယ် ။ မကြာခင် ဒီအခမ်းအနားက ရတဲ့ စုပေါင်းသံဓိဌါန် ကို ကြေညာသွားမှဖြစ်ပါတယ်။။
Posted by LRDP at 8:51 AM0comments Links to this post
မတ်လ (၁၃) ရက်နေ့ သည် မြန်မာနိုင်ငံ လူ့ အခွင့်အေ၇းနေ့ဖြစ်သည် ။(ကိုဖုန်းမော်ကျဆုံးခဲ့သည့်နေ့ )
ကျမ ပဲ အင်းစိန် စက်မှုတက္ကသိုလ် နဲ့ နီးတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းမှာပညာသင်ဖြစ်ခဲ့လို့ လား? ကျမတို့ အသက်အရွယ်နဲ့ 
ကျမတိ်ု့ ခေတ်မှာ ကျမဟာ ဒီတော်လှန်ရေးထဲ ပါဖြစ်ဖို့ အကြောင်းကဖန်ခဲ့လို့ လား ?
ဒီလို နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော် ကျော်ဖြတ် တိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့လမ်းမှာ ကျဆုံးသွားခဲ့တဲ့ကိုဖုန်းမော်တို့ ရဲ့ဝိဥာဉ်အသက်တွေကို
မျက်နှာပြဖို့ခက်ခဲ့ရပြီကိုဖုန်းမော် ရေ ---
Posted by LRDP at 9:13 AM3comments Links to this post
Posted by LRDP at 10:51 PM0comments Links to this post
Posted by LRDP at 8:37 AM 1 comments Links to this post